Rajo Cusub Oo Ku Saabsan Bidaarta Oo Khubaro Xal u Heshay Daawaynteeda - Daryeel Magazine
Khubaradan waxay tilmaameen in daawadan qayb ka mid ay tahay unugyada cad ee dhiigga, gaar ahaan kuwa la yidhaa Monocytes ee jidhku soo saaro marka.
Cilmi-badhayaal u dhashay dalka Spain, ayaa sheegay in ay xal u heleen badaarta dad badan oo caalamka ku nool cabasho badan ka muujiyaan, waxaanay sheegeen in ay si kedis ah u heleen hab cusub oo lagu daawayn karo, sababtoo ah waxay sheegeen in unugyada dhiigga cad laga faa’iidaysanaayo, timana ay soo saarayaan.
Khubaradan oo ku takhasustay daawaynta cudurka kansarka oo daawo xannuunka kansarka lagu daaweeyo ku tijaabinaysa jiir, ayaa amakagay, kaddib markii ay ogaadeen in ay daawadan soo saarayso timo.< >Khubaradan waxay tilmaameen in daawadan qayb ka mid ay tahay unugyada cad ee dhiigga, gaar ahaan kuwa la yidhaa Monocytes ee jidhku soo saaro marka hab-dhiska difaacu ka hortagaayo caabuqa amma walxaha qalaad ee jidhka soo gala.
Perez-Moreno oo ka mid ah saynisyahannada helay daawadan, kana tirssan Mac-hadka Cilmi-baadhista Kansarka ee dalka Spain, gaar ahaan xarunta magaalada Madrid, ayaa sheegay in ay ogaadeen unugyo ka masuul ah in ay timaha soo saaraan laga dhex heli karo unugyada cadcad.
Daldaloolada timuhu ka soo baxaan waxa lagu qasbi kara in timo ka soo baxaan, iyagoo khubaradan sheegay in daawadooda la isticmaali karo si bidaarta timo looga soo saaro.
Carqaladaha waqtigan hortaagan waa in unugyada cadcad ay dedejin karaan oo kaliya in dimo la sameeyey, balse waqtigan waxa la ogaaday in daawo laga samayn karo, door muhiimana ay ka ciyaari karaan in ay ka hortagaan bidaarta amma ay daweeyaan qof timuhu ka daateen,” ayey khubaradu ku qoreen jariirada PLOS Biology
Daawada Bidaarta Iyo Timaha Daata Qaabab Cusub Oo La Iskaga Ilaalin Karo Cudurka Macaanka Nooca Labaad (Type 2 Diabetes) Waa maxay sababta asalka u ah Rajo-dhigida? Xaqiiqooyin Ku Saabsan Dumarka Musliimiinta